चैतमा औसतभन्दा बढी सुन आयात
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको चैत महीनामा नेपालमा औसतभन्दा बढी सुन आयात भएको छ । चालू आवका अन्य महीनाहरूमा औसतमा रू. २ अर्ब १४ करोड बराबरको सुन आयात हुने गरेको थियो । तर, चैत महीनामा भने रू. ३ अर्ब २ करोड ७१ लाख बराबरको सुन आयात भएको छ ।
गत चैत २४ गतेदेखि वैशाखको पहिलो हप्तामा मात्रै ५०० केजीभन्दा बढी सुन आयात भएको उनको भनाइ छ । कोरोना प्रभाव नबढेमा अबका दिनमा सुनको व्यापार राम्रै हुने उनको अनुमान छ ।
गत चैतदेखि सुनको आयात परिमाण दैनिक १० केजीबाट बढाएर २० केजी पु¥याइएको छ । त्यसको असरले पनि सुनको आयात बढ्न सहयोग पुगेको हो ।
नेपालमा सुन आयात गर्न पाउने अधिकार वाणिज्य बैंकहरूलाई मात्रा छ । बैंकहरूले नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको सहकार्यमा सुन आयात गर्दै आएका छन् ।
चालू आवको चैतसम्म नेपालमा रू. १९ अर्ब ३१ करोड ६ लाख बराबरको सुन आयात भएको छ । यो गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ४३ दशमलव ४६ प्रतिशतले बढी हो ।
गत आवको चैत मसान्तसम्म रू. १३ अर्ब ४६ करोडको सुन आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । विभागका अनुसार चालू आवमा नेपालमा २ हजार ७६० केजी सुन आयात भएको छ । यूएईबाट १७ अर्ब १८ करोड र टर्कीबाट २ अर्ब १३ करोड बराबरको सुन आयात भएको छ । कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भई सुनको मूल्य अत्यधिक बढेपछि चालू आवको शुरूको चरणमा नेपालमा यसको कारोबार ठप्पजस्तै भएको थियो । कोरोना रोकथाम गर्न लगाइएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाले सुन व्यवसाय प्रभावित भएको थियो । त्यसैले चालू आवको शुरूको चरणमा सुनको आयात न्यून थियो । तर, पछिल्लो समय बजार खुलेर माग बढेपछि सुनको आयात बढ्दै गएको हो ।